China Unitarp sere n'elu inflatable Yoga ute Okenye Igwu Pool Water Yoga Mats na Eva Non-ileghara Kedo akwa 0389 Imeputa na Factory | Yamazonhome
Unitarp sere n'elu inflatable Yoga ute okenye okenye Igba mmiri Pool Water Yoga Mats na Eva Non-ileghara Kedo akwa 0389
Nkebi: Inflatable Ikuku Track Inflatable Yoga ute
Ihe onwunwe: DWF na PVC (ihe 0.7mm PVC)
Ọkpụrụkpụ: 10cm, 15cm, 20cm, 30cm
Agba: nwere ike ahaziri
Nha: 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M ma ọ bụ ahaziri
Akara Logo: Ahịa ahịa
Ngwa: Akpa na-ebu, ngwa ndozi, mgbapụta ụkwụ
Ngwugwu: Thickened na obi tara mmiri katọn nkwakọ, 7 oyi akwa corrugated igbe
Mnflatable Gymnastics Air Track Tumbling uteemepụtara site na Eco-friendly material na e mere na sayensị, mepụtara n'okpuru nlezianya njikwa, ngwaahịa anyị nwere ike inyere gị aka ịme yoga nke ọma. Ihe eji eme ugha yoga ikuku na-enye ebe di nma ma di nchebe na ulo ma obu aru mmiri. Chebe aka gị na ụkwụ gị n'oge yoga na akwa akwa ikuku a. Uzo a na-adighi adighi nma na-enye ebe di nma ma di nma ka igha eme ihe obula.
Akụkụ nke Inflatable Air Track Inflatable Yoga ute:
a. Debe n'ime ime ụlọ gị, azụ azụ, n'akụkụ osimiri, ebe ọ bụla, ma ọ bụ ime ụlọ ma ọ bụ ime ụlọ anyị.
b. Ọ dị mfe ibugharị site na mgbatị gaa mgbatị ahụ. Ikuku Ikuku dị nfe na obere ọ ga-adaba n ’ọdụ azụ nke ụgbọ ala gị.
c. ihe Inflating na deflating a na-eme na otu nkeji.
d. Nwere ike ịtọ nrụgide na ihe ọ bụla n'etiti nkume-siri ike na bouncy-soft.
e. A na-emegharị elu ugboro ugboro na-enweghị ohere ị ofụbiga mmanya ókè karịa na ngwa ọzụzụ ọdịnala, nkà ọgụ, mgbatị ndị agadi, ahụike ... NA ỌZỌ!
Advantage nke inflatable Air Track inflatable Yoga ute:
1. Ọ bụ nchebe na mfe ịmụta maka ịmalite-eme egwuregwu mmega
2. Ọ bụ ezigbo ọzụzụ maka onye na-eme egwuregwu mmega ahụ.
3. Asọmpi maka ọkwa niile nke ịda ada.
4. Ọ dị mma maka klaasị ọzụzụ.
5. Ọ dị mma maka ihe ngosi n'adịghị ka mgbatị mgbatị ahụ Air tumbler ga-adaba n'ọtụtụ ụgbọ ala.
6. Nke a bụ ụdị asọmpi ọhụrụ n'etiti mgbatị maka mgbatị ahụ ma ọ bụ tumblers.
1. Mepee valvụ ahụ.
Jiri mgbapụta mgbapụta ahụ.
3.Dunye mgbapụta ahụ n'ime valvụ ahụ ma fụọ.
4.Mee ma gawa.
Wide Ngwa nke Inflatable Air Track Inflatable Yoga ute:
Nwere ike idowe ihe egwuregwu mmega ahụ a na-emegharị ọnụ n'ala ụlọ egwuregwu, ụlọ mgbatị ahụ, na ọzụzụ dị elu, klọb mgbatị ahụ, klọb ịgba egwu, ụlọ akwụkwọ, mmega ahụ, ebe obibi, oge ezumike, mgbatị ahụ, ọzụzụ ọkachamara, ogige ma ọ bụ azụmaahịa mgbazinye. Ọzọkwa, enwere ike iji ya n'ụsọ osimiri ma ọ bụ mmiri, azụ azụ, ala ahịhịa maka Cheerleading / Practice Gymnastics / Beach / Park / Home use.
N'ihi na ute na-apịaji maka njem na nchekwa, ụfọdụ creases bụ nkịtị. A na-atụ aro ka ị mezue onu oriri otu ugboro mgbe ị natara ihe ndina maka oge mbụ ka o wee nwee ike ịlaghachi n'ụdị mbụ ya.
Biko hụ na enweghị ọkụ ma ọ bụ ihe dị nkọ gburugburu mgbe ị na-eji egwu ikuku.
Biko hụ hụ na ịchekwa ya n'ebe nkụ wee gbochie ya ịta ahụhụ.
Ọ bụrụ na mmebi nke ngwaahịa a na-anọnyere 10cm, ịnwere ike iji gluu na patch rụzie ya
Companylọ ọrụ anyị bụ nnukwu ụlọ ọrụ na-afụ ọkụ nke ọkachamara na imepụta, imepụta na ngwaahịa nke ngwaahịa ndị na-afụ ọkụ. Kemgbe ntọala ya, ụlọ ọrụ ahụ etinyela aka na imepụta ngwaahịa na nyocha na mmepe. Mgbe ị gafere ule na mbupu ndị ọkachamara, anyị na-ekwe nkwa na ogo ngwaahịa ndị ruru ndị ahịa dị oke mma. Anyị ụlọ ọrụ nwere a ọkachamara ngwaahịa imewe otu na kọmputa ike na-eme ihe nakawa etu esi, na anyị na ngwaahịa na-exported na Europe, America, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, na Middle East na mba ndị ọzọ na mpaghara. Companylọ ọrụ anyị na -emepụta ihe nkwado maka egwuregwu egwuregwu, akụrụngwa ogige, yana ihe egwuregwu ụmụaka. N’etiti ha, egwuregwu ahụ na-atọ ụtọ gụnyere caterpillars ndị na-afụ ọkụ, mbekwu na anụ ọhịa bekee, ụgbọ mmiri dragon ụgbọ mmiri a na-atụgharị atụgharị, ụzọ mgbochi anọ na-atọ ụtọ, wiilị na-agagharị, wdg; mmiri ogige mmiri tumadi na-agụnye nnukwu-ọnụ ọgụgụ ebe igwu mmiri, mmiri jighị ọsọ site omenala, nnukwu slide ọdọ mmiri, wdg; mmiri Tomụaka tumadi na-agụnye mmiri ice, mmiri na-eje ije bọọlụ, mmiri n'elu, mmiri slides na na. Companylọ ọrụ anyị ji obi anyị niile na-enye ndị ahịa anyị ngwaahịa dị elu, ọnụ ma dịkwa ọnụ ahịa.
Nke gara aga: Westernlọ Ime Ọdịda Anyanwụ Dị Mgba Ugboro abụọ Bed Bed Bed Bed # 0109
Osote: Gymnastics Air Mat 2m 3m 4m ọkachamara Inflatable ikuku track Yoga Sport ọgụ na mpe mpe akwa gbochie mmerụ tumbling mats 0388
Caines Ime ụlọ Obere Anụmanụ nke obere na wiil ya 0223
Pet #Sofa Bed Cover All-Nzube Teddy Labrador ...
Nordic ụlọ oriri na ọ Nụ wụ rụrụ iron dining table na ...
Fann Brown Wood na ulo Dog House
Inflatable mmiri skai guzoro-elu surfboard yoga bo ...